Iziqukathi ze-Crypto Mining, i-New Bitcoin Miner, i-Mobile Mining Unit - iTianqi
I-Hardware Yezimayini Esetshenzisiwe
Umkhiqizi webhokisi lezimayini elisebenza ngobuchwepheshe be-cryptocurrency kanye nomthengisi wemishini yezimayini ezingamasekeni intengo yayo ingaphansi kakhulu kwentengo yemakethe
Ubuchwepheshe obuholayo: Ibhokisi lezimayini le-cryptocurrency esilihlelile futhi salikhiqiza lingakongela cishe i-70% yezindleko zezimayini. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwayo kokuthembeka kusebenza kakhulu kakhulu, okunganciphisa ngempumelelo izinga lokushisa futhi kwandise impilo yensizakalo yomshini wezimayini.
Intengo eqinisekisiwe nekhwalithi ephansi: Intengo yebhokisi lemayini elenziwe yiTianqi Mining ayinakuphikiswa ngokususelwa kumgomo wekhwalithi kuqala.
Ibhokisi Lemayini Ehlanganisiwe Elihambisa Amanzi apholile
Izinzuzo zebhokisi le-ore box elihlanganisiwe
isilinganiso samandla ebhokisi lamamitha angu-20 ngamasethi ayi-180, ukukhulisa isikhala
sebenzisa ukwakheka kwemigqa emibili, umoya ongaphezulu uphume, umoya ohlangothini ungene.
Bona ukukhiqizwa kwesisindo nesivinini sokuthumela esisheshayo
Sicela wazi ngomusa ukuthi amandla wokufaka adingekayo we-T17 + ngu-220V.
Ibhizinisi lomhlaba jikelele
Ukwenza ngokwezifiso okukhethekile
Ukubonisana kwamukelwa izinsuku ezingama-365 ngonyaka, ungaxhumana nathi nge-imeyili, ifoni, i-Skype / Facebook / twitter! Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile lihlale lilindile ngesicelo sakho.
Ngemuva kokuqonda izidingo zakho, sizokunikeza iziphakamiso zobungcweti nezingcaphuno. Ngemuva kokuthi i-oda liqinisekisiwe, imigqa yethu emihlanu yokukhiqiza izoqala ukukhiqiza ngesikhathi esifanele, futhi kwenziwe ukuhlolwa okufana nokuhlolwa kokusebenza nokuhlolwa kwekhwalithi ukuqinisekisa ukuthi izidingo zakho zihlangatshezwa ngokunembile.
Ithimba elithengisa ngemuva lizohlelela izinto ezisheshayo nezokuthutha kuwe, zilandelele futhi lazise yonke inqubo ukuqinisekisa ukufika kokuphepha kuwe.
Akunandaba ukuthi uma unemibono emisha noma imicabango noma imikhiqizo ekhona ayikwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho. Sitshele konke okudingayo, sizoklama futhi sikhiqize ngokuvumelana nezidingo zakho ngokuqinile, futhi sikuhambise kuwe ngokushesha okukhulu.
Ukwazi izidingo zakho eziphuthumayo zezimayini, silwela ukunciphisa noma yiziphi izinto ezingezinhle ngaphambi kokulethwa. Uma ungathanda ukukhetha imikhiqizo yethu, sizoyifaka kusayithi. Ngamakhono ethu obuchwepheshe, singafaka ibhokisi lezimayini lisetshenziswe ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke isikhathi sakho esiyigugu siyasindiswa.
2020, kungaba unyaka we-Bitcoin counterattack
Iyini ngempela i-blockchain?
Kungani iBitcoin ibiza kangaka? Kuyini ukushintshaniswa kweBitcoin?
Amamitha angama-300 empumalanga yeMpumalanga yeSango leMayini iLong Dong kanye neXuji Highway, Junction of Zhendong Neighborhood, Longgu Town, Pei County, Xuzhou City.
asic yezimayini asic, isitsha se-btc, isiqukathi se-antbox, kusetshenziswe imishini yezimayini ze-crypto, isiqukathi se-antminer, isitsha se-bitmain,